လိုင်ယာငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိပ်တန်းလိုင်ယာငှက် (Superb lyrebird)
†Menura tyawanoides (ကွယ်ပျောက်တိမ်ကောသွားသည့် မျိုးစိတ်)
လိုင်ယာငှက်ဆိုသည်မှာ မဲန်နူရီဒေး (Menuridae) မျိုးရင်းမှ မဲန်နူရာ (Menura) မျိုးစုဝင် မြေကြီးပေါ်တွင်နေသော ဩစတြေးလျတိုက်တွင် တွေ့ရှိရသည့် ငှက်မျိုးစိတ်နှစ်ခုမှ မည်သည့်ငှက်ကိုမဆို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မဲန်နူရာ နိုဗီဟော်လန်ဒီး (Menura novaehollandiae) နှင့် မဲန်နူရာ အယ်လ်ဘာတီ (Menura alberti) ဟူ၍ လက်ရှိမျိုးစိတ်နှစ်ခု ရှိသည်။
၁ တည်ရှိဆဲ မျိုးစိတ်နှစ်ခု
(Menura novaehollandiae) ထိပ်တန်းလိုင်ယာငှက် (Superb lyrebird)၊ အက်ဘရင့်ဂျင်နယ်ဘာသာစကားတွင် weringerong၊ woorail သို့မဟုတ် bulln-bullnဟုလည်းခေါ်သည်။ တတ်သောငှက်များတွင် ကမ္ဘာ့အရွယ်အကြီးဆုံး တေးဆိုငှက်မျိုးများမှ တစ်မျိုး၊ ချဲ့ကားထုတ်နိုင်သောအမြီးနှင့် အသံတုပြုရာ၌ ထိပ်တန်းဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ငှက်။ ဩစတြေးလျတိုက် အရှေ့တောင်ပိုင်း (ဝိတိုရိယ ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှ ကွင်းစလန်ပြည်နယ် အရှေ့တောင်ပိုင်းထိ)
(Menura alberti) အယ်လ်ဘာ့တ်လိုင်ယာငှက် (Albert's lyrebird) ဝိတိုရိယ ဘုရင်မ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သော အယ်လ်ဘာ့တ်မင်းသားအား ဂုဏ်ပြုမည့်ဆိုထားသော အမည် နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ်နှင့် ကွင်းစလန်ပြည်နယ်တို့အကြား
ဩစတြေးလျတိုက်တွင် တွေ့ရှိရသည့် လိုင်ယာငှက်သည် အသွင်အားဖြင့် ထူးခြားလှသောငှက်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းပိုင်းနှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်မှာ အခြားငှက်များနှင့် မခြားနားလှသော်လည်း အမြီးမှာ မည်သည့်ငှက်မြီးနှင့်မျှ မတူချေ။ သူ၏အမြီးသည် အနောက်နိုင်ငံ ရှေးစောင်းများ(Lyre)နှင့် တူသဖြင့် လိုင်ယာငှက်ဟု အမည်တွင်ခြင်းဖြစ်လေသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ 'စောင်းသဏ္ဌာန်အမြီးရှိသော ငှက်' ဟုဖြစ်ပေသည်။ ညိုမည်းသောအရောင်တွင် အစိမ်းမှတ်များဖြင့် တန်ဆာဆင်လျက် ရှိသည်။ အမြီးအတောင်များသည် နှစ်ပေခန့်ရှည်၍ ဥဒေါင်း၏ အမြီးကဲ့သို့ နောက်တွင် တွဲကျလျက် ရှိသည်။ အမြီးကိုထောင်၍ ဖြန့်လိုက်သောအခါ အနောက်တိုင်းစာပေတွင် ထင်ရှားသော 'အပိုလို' ၏ စောင်းနှင့် သဏ္ဌာန်တူလေသည်။ ထိုအမြီးကြောင့်လျှင် ထင်ရှားသောငှက်မျိုး ဖြစ်လာလေသည်။ ထူးခြားချက်မှာ ငှက်ဖို၏အမြီးသာ စောင်းနှင့်သဏ္ဌာန်တူခြင်း ဖြစ်သည်။
လိုင်ယာငှက်သည် တေးဆိုတတ်သောငှက်များတွင် အရွယ်အကြီးဆုံး ငှက်မျိုး ဖြစ်သည်။ အသံမှာ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသည်။ အခြားငှက်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ၏ သီချင်းများကိုလည်း အတုခိုး၍ ဆိုတတ်သည်ဟုဆိုသည်။ မိတ်လိုက်ချိန်များ၌ ငှက်ဖိုသည် ငှက်မအားချစ်ရေးဆို သောအခါများတွင် သူ၏စောင်းသဏ္ဌာန်အမြီးကို တောင်ပူစာကလေးပေါ်မှနေ၍ အလှပြနေတတ် လေသည်။ လိုင်ယာငှက်သည် အသိုက်ကို မြေကြီးပေါ် သစ်ပင်ရင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျောက်ဆောင်ရင်းတွင်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အသိုက်ပြုလုပ်ရာတွင် သန်မာသော သစ်မြစ်များကို ရက်ထား၍ ဘေးပတ်လည်တွင် အမွှေးအတောင်များဖြင့် ကာရံထားသည်။ အသိုက်၏အနားပတ်လည်တွင် တုတ်ချောင်းများ၊ ရေညှိများနှင့် သစ်ရွက်များကိုစုပုံထားပြီးလျှင် ဘေးပေါက် တစ်ခုဖောက်ထား၏။ အသိုက်ထဲတွင်ကား တစ်ခုတည်းသောဥကိုသာ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငှက်ငယ်သည် သုံးလေးနှစ်ကြာမှ အမွေးအတောင်စုံလေသည်။
လိုင်ယာငှက်သည် ကြောက်ရွံ့တတ်၍ အနှောင့်အယှက်တွေ့သောအခါ ထူထပ်သော သစ်ပင်များအောက်သို့ ထွက်ပြေးလေ့ရှိသည်။ အပြေး လျင်မြန်၏။ ကောင်းစွာပျံသန်းနိုင်သော ငှက်များမဟုတ်သဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင်သာ သစ်ပင်ထက်၌ နေကြသည်။ စားသောက်သောအစာမှာ ပိုးမွှားများနှင့် ခရုများဖြစ်သည်။ ဩစတြေးလျတိုက် နယူးဆောက်ဝေး၊ ကွင်းစလန်တောင်ပိုင်းနှင့် ဝိတိုရိယပြည်နယ်များတွင် လိုင်ယာငှက်မျိုးကို တွေ့နိုင်သည်။
↑ Reed၊ A.W. (1998)။ Aboriginal Words of Australia။ Chatswood, NSW: New Holland။ pp. 17, 34။ ISBN 978-1-876334-16-1။3October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၂)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိုင်ယာငှက်&oldid=718874" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။